I-Hollywood diva - 51, kodwa ingabe lokhu kungakholelwa? Isikhumba esikhulayo, umzimba omzimba, ama-curls aminyene: kubonakala sengathi u-Holly Berry usemusha futhi uyamangalisa. Noma kunjalo, ubuhle abuzange bufinyelele emncintiswaneni wakhe olula: inkanyezi kusukela esemncane isifo sikashukela. Iyini imfihlakalo ifomu elihle kangaka?
I-System Supply System
Lesi sifo sifundile umdlali we-actress ukuthi aziphathe ngendlela efanele ngokudla kwakhe: imenyu yakhe iqukethe cishe akukho sweet and dessert. Kodwa kakhulu - imifino kunoma yiluphi uhlobo, imifino kanye nenhlanzi. Ukudla nakho kubalulekile: izingxenye ezincane zonke amahora amabili kuya kwangu-3. Phakathi nosuku, uBerry uphuza izithelo nezitshalo ezingasetshenzisiwe nge-smoothies, itiye eluhlaza, amanzi anamanzi nge-lemon noma i-lime, futhi isebenzisa amantongomane, amaqanda abamhlophe noma amaprotheni agubha njengama-snacks. Kodwa-ke, inkanyezi ayiwamukeli imikhawulo emikhulu - kanye ngesonto uzivumela ukuthi uyintandokazi, kodwa ayiyona into ewusizo kakhulu.
Ku-Instagram yakhe, uBerry wabelana ngezeluleko mayelana nokuthi ungaqala kanjani ukutadisha: "Kuyinto elula ... sinqume futhi uqhubeke!". Umdumo uqinisekisa: ngenxa yombono omuhle kakhulu, imishini yesimanje yokuzikhandla, izicathulo ezibizayo zokugijima namarathoni amakhulu akudingeki. Kuyafaneleka ukuqala nge-encane - ibha yamaminithi angu-5 nsuku zonke. Bese uphoqelela isimo sakho esiyinkimbinkimbi, wengeze ukuqeqeshwa kwe-aerobics nokuqiniswa kwamandla - ukuze uqeqeshwe ngesigqi esihle. Ngemuva kokuthola impumelelo yakho yokuqala, uzojabula ukuqhubeka nokuqina.
Umthetho oyinhloko kaHolly Berry uhlala njalo. Ama-creams, ama-lotions ne-whey akho angeke abize: ukujwayela kokusebenzisa kwabo kubaluleke kakhulu. Hlanza isikhumba sakho kabili ngosuku, ungakhohlwa ukhilimu wansuku zonke nge-SPF namanzi e-micellar ehlobo, sebenzisa i-oksijeni namasikisi e-collagen - ngenyanga uzobe umangazwe yizinguquko ekubukeni kwakho.
Ukulinganisela kwe-Yin Yang, ama-hormone
Ukusebenzisa i-mandarin amafutha abalulekile
Kungani ama-lymph nodes evuvukala?
Uyabona kanjani ubulili obuhlukile
Wedding ngesitayela sokuvuna
I-Risotto ene-bacon nama-apula
I-horoscope yomuntu siqu ye-Cancer ngo-2010
Futhi iziphi izikhombi zethu: izingubo ezinhle zomshado nemikhono
Ungasindisa kanjani kukho konke
Amathiphu asebenzayo: indlela yokuguqula impilo
Ungabuyisa kanjani uthando lomyeni wakhe?
Iholidi lezingane: siya ukuvakashela futhi sizihlele